Waa Maxay Maalinta Jaceylka Adduunka? | Afrikaan I Saldhiga xalka caqabadaha
Cabdiqani Qorane Cismaan — February 14, 2020
Guud ahaan dunida maanta oo kale waxa laga dabbaal dagaa maalinta jaceylka adduuunka (Valentine’s Day). Inta aynaan ugalin taariikhda iyo wakhtiga ay maalintani bilaabmatey. Maxaad ka ogtahay waxyaabaha dhaca maalintan?
Balse ma noqon kartaa maalin ay dad Muslim sheeganayaa udabbaal degi karaan?. Haddey uddabaal dagaanna, ma haboontey inay sameeyaan waxyaabha dadka Diinta kiristanka haystaa Sameeyaan.
Ma ogtahay in maalintan 14ka Feebarweri, ay kumanaan kun oo hablood (Gashaantimo) oo caalamka ku nooli waayaan fursaddoodii Bikro nimo. Sidoo kalena Kumanaan kun oo wiil oo caalamka ahi, qaadaan xanuunada galmada la isugu gudbiyo, Sida HIV/AIDS.
Ma ogtahay in maalintan ay caadi iska tahay in aad Saaxiibadda/Saaxiibkaa (Grilfriend, Boyfriend) gurigiisa uraacdid, waxaad doontaanna soo kala yeeshaan. Sagaal bilood kaddib ma ogtahay in garacda Adduunka ugu badani dhashaan.
Maalinta noocaas ah, ma haboontey innaga oo dad muslim ah oo diinta islaamka haysanna ineynu uddabaal dagno. Mase habboontey in iyadoo maalin kaste ay dadka muslimka ah, maalin jaceyl iyo Farxadeed utahay hal maalin kusoo koobnaa. Waxaas oo dhan waxa ka daranba taariikhda madow ee foosha xun ee maalintani leedey.
TAARIIKHYAHANNADU sida aya sheegaan waxey yidhaahdaan: “Maalintani waxay billaabantay xilligii boqortooyadii Roomankii hore.
Boqorkii wakhtigaas ee roomanka oo la odhan jirey “Claudius” ayaa kala foogeeyey wiilasha iyo gabdhaha guurkooda iyo kulankooda, wuxuuna oggolaaday oo keliya habeenka dabaaldegga boqortooyadiisa in gabadh waliba warqad uu ku qoran yahay magaceedu sanduuq yar ku riddo.
Kaddibna sanduuqaas ayaa wiil waliba warqad kala bixi jirey, sidaas ayaanu ku raadsan jiray inanta magaceedu ugu qoranyay, kaddibna intaa xafladdu socoto ayay wada joogi jiren, halkaas ayaa si nasiiib ah habeenkaas qofka calool galaa uun ku dhalan jirey.
Sannadka intiisa kale ma ay kulmi jirin, ilaa laga gaadho dabbaaldegga danbe iyo sidoo kale cidda nasiibku isku beego. Sababta boqorku sidaas u sameyn jirey ayaa ahayd, inuu geli jirey dagaallo badan, dagaalladaasna uu u baahnaa askar badan oo rag ah.
Sidaa darteedna waxa uu rumaysnaa in haddii uu guurka fasaxo in aysan raggu dumarkooda iyo cidda ay jecelyihiin ka tegi Karin, taasna ay keenayso inuu nin weliba dagaalka ka baaqdo. Laakiin habkan uu ku mamnuucay guurka uu xal u yahay in nin kastaa hore ka galo dagaalka, maaddaama aanu waxba ka tegeyn.
Muddo ka dib waxaa soo baxay wadaad VALENTINE la yidhaahdo oo si qarsoodi ah isugu guurin jiray wiilashii iyo gabdhihii kiristaanka, muddo ka dib ninkaas waa la xidhay, waxaana la sheegay in jidhdil iyo ciqaab jeelka loogu dhex geystay awgeed uu u dhintay, 14-kii bishii Feebarweri. Ninkan ayey dadkii xaaladdiisa la socday u yaqaannaan ‘Shahiidkii Jacaylka’.
Baadarigii Pope Galasious ee diiinta Kiristaanka ayaa sannadkii 496 ee Miilaadiga, si toos ah u aqoonsaday in maalinkan la xuso sannad walba 14-ka Feebarweri.” Waxaan fahmi laayay innagoo og oo ka dharagsan waxa ay maalin tan tahay, iyo waxey xambaarsanteyba. Inay haddanna dhallinyaro badan oo Soomaali ahi ay yidhaahdaan waa maalintii Jaceylka.
Baryahan dambe waxa inagu soo badanaayaa dhaqamada gaalada, iyo in aynu ciidahooda udabbaal dagno. Ilaahay ha ina fahansiiyo diintiisa xaqqa ah oo ha inagu sugo.
14 / Feebarweri/ 2020.
Tags: Maalinta Jaceylka Adduunka?
Next post Dhaqaalaha iyo Argagisada
Previous post Waa Maxay Tayada Aqooneed ee Maamulaha Wanaagsan?